ဘဏ်လုပ်ငန်း | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
စစ်မှန်သောငွေနှင့်ကစားတစ်ဦးသိုက်အောင်ခင်မှာ, သငျသညျမှတ်ပုံတင်ပြီးရဲ့ login ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ငွေပေးချေမှုအသီးအသီးအဘို့နည်းလမ်း, သငျသညျအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ပေးထားကြသည်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ဖန်တီး ငွေပေးချေမှု၏နှစ်သက်သော mode ကိုအသီးအသီးအဘို့သီးခြားအကောင့်. သင့်အကောင့်မှတစ်သိုက်စေရန်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပြီး:
."ငွေကိုင်" icon လေးပေါ်နှိပ်ပြီးအပ်နှံ option ကို select လုပ်ပါ.
.သိုက် mode ကို Select လုပ်ပါ.
.ငွေပေးချေမှု၏နှစ်သက်သော mode ကိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အကောင့်အသိအမှတ်ပြုသည်.
.အရောင်းအဝယ်အသေးစိတျဖို့နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးကမေးလ်အတည်ပြုချက်ကိုစလှေတျဖြစ်ပါတယ်.
TopSlotSite အားဖြင့်ကောက်ယူအားလုံးအွန်လိုင်းမှဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြတယ် olor စီမံခန့်ခွဲမှုလီမိတက်. ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပိုမိုသိ.
Player ကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်သီးခြားက ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အောက်တွင် theTopSlotSite ငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်းဇယားကိုရှာဖွေကျေးဇူးပြုပြီး. အသီးအသီးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်. ပြီးပြည့်စုံသောညွှန်ကြားချက်, ထိုနည်းလမ်းသင်္ကေတကို click. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်သည်မည်သည့်အပေါ်ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ် အကောင့်ပြုလုပ်ပါ သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအတွက်အကောင့်သစ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ link ကို.
.Freephone: (+) 800-7767-6343 (Australia, Austria, Belgium, တရုတ်နိုင်ငံ, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Macau, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Taiwan, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
.Skrill is the new name for Moneybookers, အင်တာနက်ကိုကျော်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းများအတွက်အဆင်ပြေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှု.
.အတူဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှု 12 ထောက်ခံဘာသာစကားများနှင့်ကျော်အတွက်ပြည်တွင်းငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာ 30 နိုင်ငံပေါင်း.
.ထိုကဲ့သို့သော SMS နှင့်ဖက်စ်ပေးပို့ခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်န်ဆောင်မှု.
တိုက်ရိုက်ဖုန်းကိုထောက်ခံမှု: +44 870 383 0232
မှာတိုက်ရိုက်ဖုန်းကိုထောက်ခံမှု (+44) 870 383 0232 တနင်္လာနေ့ - တနင်္ဂနွေ 9:00 – 18:00 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်.
ဖက်စ်: ဗြိတိန်နိုင်ငံ 0870 922 3274, ယူအက်စ်အေ 509 271 5556, Germany 032 211 0899 0014, Netherlands 020 524 8418, France 01 5301 0809, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (+1) 509 271 5556 သို့မဟုတ် (+44) 870 922 3274.
.How to fund: Moneybookers နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့အကြွေး / debit ကဒ်နှင့်ဘဏ်အသေးစိတျ Register မှာကျော်ဆပ်ဖို့သူတို့ကိုအသုံးချ 20,000 အွန်လိုင်းဆိုင်များ. This means that you don’t need to provide them each time you want to purchase goods and services online.
.UKash မှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်ရန်, ရိုးရှင်းစွာ TopSlotSite အတွက်ငွေကိုင်ထံမှ Ukash option ကိုရှေးခယျြ . ထိုအခါအသက် 19-ဂဏန်း code ကိုနှင့်ဘောက်ချာ၏တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါ. Your payment is accepted immediately.
.သငျသညျ£5ကနေ£ 200 မှတစ်ခုတည်းငွေပေးချေစေ UKash ကိုသုံးနိုင်သည် (သို့မဟုတ်ညီမျှ). ther no "ဆိုတဲ့ account ကို" ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်, no further payments can be taken from you. When you want to pay again, ကိုယ့်ထက်ပို Ukash ရ.
သငျသညျ depositing ရန်ပုံငွေနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပါက, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး, သင်တို့သည်ငါတို့၏မြင့်မားလေ့ကျင့်သင်ကြားဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုလူတဦးကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် 24 အီးမေးလ်ဖြင့်နေ့နာရီ, ဖုန်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းချက်တင် – Contact Us .